Izibuko ezingaphakathi kwefulethi lethu
Indlu yasekhaya Umklamo wangaphakathi
Kunoma yiliphi ifulethi ungathola isibuko, yinto ehle kakhulu yokuklama. Cabanga ngokujulile ngokuthi izibuko zihlala kuphi ezindlini. Ngaphezulu kwetafula lokugqoka, emgodini, ngaphambi kokushiya indlu ungabheka wena, ngaphezu kwezinga lokugezela. Ingxenyeni engenhla yesikrini esibukweni kufanele ihlale ku-170 cm ukusuka phansi, ububanzi - ubuncane obuyi-50 cm, umuntu ozohlala kuyo uyohambisana ngokuphelele, kuneminye imithetho elula ongafaka ngayo izibuko. Izibuko ezingaphakathi
Yiqiniso, isibuko akuyona imidwebo, njengenfenisha, i-chandelier noma amakhethini. Uma lihlelwe kahle futhi lizungezwe, isibuko sizodlala, sigcine futhi sizodlala indima yento esemqoka ekwakhiweni kwangaphakathi.
Indawo nokuklama kwezibuko
Ukusebenzisa izibuko, ungabonisa ngokucacile isikhala samakamelo amancane noma ukwandise umzila omncane. Kodwa uma ubeka isibuko phakathi kwodonga olukhulu, luzobukeka lunesizungu. Hlela eceleni kwesikrini izibuko eziningana, wengeze ngezimele ozimele, nezibani zengezela phezulu. Igalari yezithombe izotholakala, futhi esibukweni ngasinye sibeka isithombe se-hostess sizobonakala. Uma kuboniswa, isibuko yisithombe sethu sangempela ngesikhathi sangempela.
Ngokubeka isibani ukukhanyisa isibuko, ungayifaka esikebheni esibuko ngokwayo. Esimweni esinjalo, isibani kufanele sibe nesibani sokukhanyisa isibhakabhaka noma udonga oluhle kufanele libe nesigcawu esikhulu. Uma kuboniswa esibukweni, ukukhanyisa kuzoba kabili futhi kuzokwenza kube ne-glare eyengeziwe eyengeziwe.
Uma ingaphakathi lingenodonga oluzungezile, kodwa ukujoyina nalo kanye nodonga oluqondile kungabekwa indawo yokubukwa kwesibuko, uthola umuzwa wendlu egumbini. Uma unesithakazelo ezitshalweni zasendlini kanye nekhoneni lefulethi linikezelwa ezimbali, bese uhlangana ngezibambo ezimbili udinga ukuhlela isibuko, bese uthola umuzwa wensimu enkulu endlini.
Uma ingaphakathi line-plasterwork yokuhlobisa noma i-wallpaper kanye nodonga olushelelekile odwetshiwe, khona-ke emahlangothini alezi zindonga ungasebenzisa i-mirror tile engekho kuka-20Х20 cm, ngakho-ke ungakhetha indawo oyifunayo edongeni, lokhu kuzokwengeza ukukhishwa okungeziwe. I-invoyisi enjalo iqukethe umdwebo omncane, izibuko zingahle zilahleke kuwo, kodwa uma izibuko zithola isibani esitheni kusihlwa noma i-sunbeam, udonga lonke luzodlala i-glare enhle.
Isibuko, njengento yobuciko
Ukushintsha ukuma, ifreyimu yesibuko, ungakha izinketho ezithakazelisayo zokwakha izindlu zangaphakathi. Omagazini abaningi banikeza iseluleko esiwusizo sendlela yokunikeza isibuko umthunzi wendlela yokugulela isibuko. Kunzima ukuzibukela ngokwesibuko, kodwa ngaphandle kwezinkinga kungenziwa emhlanganweni. Ama-workshops amaningi, kanye nezibuko ezibukhali, zinikeza izibuko zokulinganisa. Ungakhetha iphethini bese ukhipha i-stencil kuwo ifilimu ekhethekile yokunamathela. Lezi zinsizakalo zinikeza izindawo eziningi zokukopisha nokunyathelisa. Ngokusho komdwebo wakho ne-stencil, kuzobonakala ukuthi i-stencil esibukweni izobekwa kanjani, ungakwazi kalula futhi kalula ukuthola umkhiqizo wesibuko somlobi, ongaphakathi kwakho ozothatha indawo yayo efanele.
Izilinganiso zokugqoka zihlukile, zingaba yi-nuance yokuhlobisa ekhoneni, elingalimazi ukubheka esibukweni bese imboza yonke indiza yesibuko. Ngesikhathi esifanayo, ukubonakaliswa okuyinhloko kulahlekile, kodwa iphethini elicashile elibonisayo lizokwenza wonke iphaneli ibe nenhle ehlukile. Uma ubonisa isigamu sobuso bonke besibuko, isithombe esivela kuso siphenduka sibe "siphila" futhi sifihle ngenxa yombonakaliso, okuyinto kunoma iyiphi ingaphakathi ibonakala inkulu.
Lokhu akukhona konke okungashiwo ngesibuko. Kungenye yezinketho ezishibhile futhi ezilula, okuvumela ukuthi udale ezindlini eziningi eziningi ezikhethekile, eziyingqayizivele.
Indlela yokugqoka izimpumputhe wena
Ingaphakathi egumbini lokuphumula, isitayela sesiNgisi
Ingaphakathi ekamelweni labantwana labafana
Indlela yokwenza indlu eqashiwe ingcono kakhulu?
I-phytodesign enhle ye-interiors
Indlela yokwenza ikhishi langaphakathi lisebenza: imithetho emithathu ebalulekile
Yini manje ifenisha ekhishwe imfashini
Udaba lwezezindlu kanye nokuphila okusondelene
Ingabe kufanelekile ukuhlangana nobaba onesizungu?
U-Putin waseJapane wahlangana nobuhle baseMpumalanga
Ingabe amafutha we-soya ayasiza?
I-Typology yamababa esizayo
Uma ushadile futhi uhlangane nothando lwangaphambili
Kwaqedile: u-Anastasia Volochkova ubonise konke, isithombe
Amathebulethi noma i-spiral?
Isobho nge amazambane kanye courgettes
Iyini imishado iminyaka?
Vula ukuphuka: usizo lokuqala
Cocktail "Margarita" nge ikhabethe
Ukubuyiswa kwezinwele, izikhambi zabantu
Isaladi "Olivier enhle"
Ingabe kukhona inkohlakalo kumuntu noma iso elibi?